MUQDISHO, Soomaaliya- Kulan u dhexeeya maamulada Soomaaliya iyo dowlada Federaalka ah ayaa galabta Makhribkii si rasmi ah uga furmey magaalada Muqdisho kaasoo lagaga hadlayo qodobo lix ah oo la isku afgartey.
Wadahadaladan oo si rasmiya u furmey caawa fidkii ayaa waxaa ka qayb galaya Madaxweynayaasha Shan maamul goboleed iyo Madaxda dowlada Federaalka Soomaaliya kuwasoo la filayo gabagabada kulankaan kasoo saari doonaan warmurtiyeed.
Qodobada ugu muhiimsan kulankaan ayaa waxaa kamid ah; Xoojinta Wada Shaqeynta iyo Xalinta Arimaha taagaan ee dowlada Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, Dardergalinta Nabad galyada Dalka iyo Ciribtirka Argagixisada, Geedi socodka doorashada "Hal Qof iyo Hal Cod" sanadka 2020.
Dhinaca kale, kulankan ayaa waxaa kaalin muhiim kaga jira Wasiirka arimaha gudaha dowlada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho kooxda Al- shabaab la beegsanayso qaraxyo kuwasoo ay ku dhimanayaan dad rayid ah, oo aan waxba galabsan.
Halkaan Ka Akhri Ajendaha Lagaga Hadlayo Kulanka.